Tantsaha tsy mampinono angady - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Lezoma il y a 2 mois
Loza! Miridiridy mandripaka tsy am-piheverana ny zavaboary ny olombelona. Tsy manaja intsony ilay toeram-boninahitra nomena azy. Tsy inona izany fa ny maha filoha lefitry ny Mpahary azy, eo amin’ny fifehezana sy fitantanana ny zavaboary. Lasa mandidy manapaka amin’ny fahefana nampindramina azy izy ankehitriny. Tsy mipetraka intsony amin’ny toerana maha namana natao hiahy ny “tranobe iombonana”. Mpanjaka manjakazaka. Manampatra fahefana. Vokany: mikomy amin-draolombelona ny natiora. Tsy manaiky lembenana intsony izy. Herisetra miteraka herisetra. Main’ny afo natsangany Raolombelona. Ritra ny rano sy ny farihy izay tokony hotanehin’ny masoandro ka hiakatra ho etona na vovo-drano. Jereo raha misy rahona miforona eny amin’ny habakabaka. Zara raha misy mitsitokotoko. Antony: samy mafana ny masoandro sy ny tany. Andramo avela maharitra eo ambony toko ny nahandro. Ho hitanao fa ho ritra. May mihitsy aza no hiafarany.
Mafana ny tany
Tsy ampy ny zavamaniry sy ny ala hisintona ny rahona matevina sy mangatsiaka tokony hilatsaka ho orana. Tsara ho marihina fa eny amin’ny toerana ahitana ala arovana, toa an’Andranomafana no matetika be rotsak’orana. Toerana maitso mavana, mamokatra sady manintona mpizahatany. Ngazana kosa ny tanety any amin’ny toerana lazaina hoe: faritra an’Ala, toa an’Ikongo, Tolongoina ary Manampatrana. Fongotra ny ala tany an-toerana noho ny doro tavy. Vaky sy sola miaraka amin’ny havoana sy ny tendrombohitra ny lohan’ny mponina. Miseho ny aretina isan-karazany. Tsy misy azo onenana intsony ny sakorololo (biby kely mandady sy monina amin’ny vodihazo) ka mandositra mankany amin’ny renirano. Lasa mampangidihidy ny rano ka tsy azo androana intsony. Mikomy ny natiora.
Tantsaha miatrika ny velo-tena
Miantraika mivantana amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona ny fahapotehan’ny tontolo iainana. Vahaolana mahomby ny fambolen-kazo fanao fanaka sy fihinam-boa. Atao matotra ny fanaraha-maso azy. Mampivarahontsana ny fiakaran’ny vidim-piainana. Azo antoka fa tsy hahavita taona ny vokatra niakatra. Betsaka ny tanimbary tsy nahitam-bokatra. Mampanahy fatratra ny fiatrehana ny maitso ahitra sy ny fampidirana mpianatra amin’ny taona ho avy. Mananontanona ny mosary. Misikina fa hitolona. Fady antsika tanora ny mitaingina tamboho. Ialaontsika ny kolontsaina moramora, ny mitady tany malemy hanorenam-pangady. Te hioty vokatra eo noho eo nefa tsy mandray ravin-dena. Halavirintsika ny kolontsain’ny tsy firaharahana. Iaino ny maha tantsaha voalaza ao amin’ny karapanondronao.
Andao hambolena amin-jezika sy atao ara-tekinika ny voly mbizo sy kajaha. Ny voly avotra sy ny voly anana tsy azo hadinoina. Tsy afaka hionona amin’ny fiompiana sy ny fambolena nentim-paharazana intsony isika. Mitombo manko ny vava homana kanefa ny tany mihamanta sy mihatery. Manome toky hanampy ny tantsaha ho matihanina ny toeram-piofanana eny Andriamboasary. Hampianarina anao ao ny fahaiza-mitantana mba ampisy ny ambim-bava. Tsarovy fa izay mampinono angady dia hitrotro fahasahiranana